रोकियो चितवनका एसपी दानबहादुर मल्लको सरूवा ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/रोकियो चितवनका एसपी दानबहादुर मल्लको सरूवा !
चितवन प्रहरी प्रमुख (एसपी) दानबहादुर मल्लको सरुवा रोकिएको छ । आफ्नो सरूवा तत्कालका लागि स्थगित भएको मल्लले जानकारी दिए । ‘म चितवनको प्रहरी प्रमुख भएको एक बर्षपनि पुगेको छैन्, उनले भने, ‘समयावधि नपुगेकाले सरुवा रोकिएको होला ।’
गत पुस ४ गते मल्लसहित २४ जना एसपीको सरूवा भई चितवनमा गंगा पन्त आउने सूचि गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो । तर सरुवाबारे आफूलाई कुनै पत्र प्राप्त नभएको मल्लले बताए । उनि चितवनमा प्रहरी प्रमुख भएर आएपछि चर्चित काण्डहरु घटेका छन् ।
मल्लले विभिन्न काण्ड समाधान गर्न र जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत गराउन आफू सफल भएको जिकिर गरे । चितवन संवेदनशिल जिल्ला रहेको र यहाँको सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउन आफू सक्षम रहेको उनको तर्क छ ।
लामो समय नेकपा अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सुरक्षा गार्डको रुपमा काम गरेका मल्ललाई प्रचण्डको दबाबमा सरुवा रोकिएको प्रहरी स्रोतले बतायो । अर्कोतर्फ एसपी गंगा पन्त चितवनमा पहिलो महिला प्रहरी प्रमुखका रुपमा आउने भने पनि उनको आगमन अनिश्चित भएको छ ।
कोरोना भाइरससँग जुधिरहेको चीनलाई नेपालबाट पठाइयो १२ हजार वटा मास्क